Ny Nosy Similan ~ Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Ny Nosy Similan
Ity vondrona nosy ity dia any amin'ny morontsiraka andrefan'i Thailand. Ny nosy 9 ihany no misy azy ireo, eo amin'ny ranomasina Andaman izy ireo ary miara-manangana valan-javaboary tokana. Ny nosy 2 ihany (isa 4 sy 8) no mahazo mpizahatany. Ny nosy 7 sisa no avela hilomano. Ny nosy tsirairay dia manana anarana am-bava, ohatra, nosy 8 no antsoina hoe Similan, ary No. 4 no antsoina hoe Miang. Na izany aza dia ampiasaina matetika ny isa.
Ity no tranobe fisitrandrahana tsara indrindra eran'i Thailand. Misy tany mahafinaritra sy tena tora-pasika mahafinaritra. Tsy trano fandraisam-bahiny tokana anefa no ao amin'ny Similans. Azonao atao ny mijanona ao mandritra ny andro maromaro, mandany ny sambo ao anaty sambo akaikin'ny morontsiraka.
Ny safidy mora indrindra sy mora indrindra hitsidika ny Nosy Similan dia ny famakiana vondrona andiany na olon-tokana. Amin'ny maha-fitsipika azy, ny fandaharana fitsangatsanganana 1 andro dia ahitana ny fandinihana ireo nosy marobe tsy mitondra azy ireo, milentika na snorkeling akaikin'ny nosy iray, mivezivezy amin'ny iray na avy amin'ireo nosy nomena alalana hisakafo ary miala sasatra eny amoron-dranomasina. Ny fitsangatsanganana roa andro dia ahitana fijanonana hafa indray alina amin'ny sambo.
Azonao alaina ny Nosy Similan 4 sy 8 mandritra ny vanin-taona mafana: manomboka amin'ny 16 Oktobra ka hatramin'ny 15 Mey. Amin'ny andro hafa amin'ny taona dia voarara ny fitsidihan'izy ireo. Na izany aza, amin'izao fotoana izao ny masoivoho fitetezam-paritany sasany dia manao fitsangatsanganana eto na dia tsy ara-dalàna io ary tsy ara-dalàna.
Ny vidin'ny kely indrindra ho an'ny fitsangatsanganana amin'ireo nosy maharitra mandritra ny 1 andro dia 1 800 baht. Tafiditra ao amin'ity nosy ity ny famindrana, fidirana amin'ireo nosy, ny fanofana fitaovana ho an'ny snorkelling sy ny sakafo atoandro. Raha mandresy tanteraka ny lalana mankany amin'ireo nosy ianao dia aloa fanampiny amin'ny 500 baht ny fidirana amin'ny faritany ho an'ny andro iray.
Mba handresena ny làlana mankany amin'ny nosy Similan avy any Phuket dia mila mitondra lalana 53 km avaratra ianao mankany amin'ny seranana Khao Lak. Avy eo dia adiny iray eo ho eo raha handeha sambo mandeha amin'ny sambo Similan. Matetika dia mikorontana mafy ny sambo, ka tsara raha maka pills antsasaky ny ora alohan'ny hidirana ny sambo hanampy amin'ny fisorohana aretina. Azo vidina ao amin'ny fivarotam-panafody rehetra na azo alaina amin'ny faran'ny fanavaozana alohan'ny hidirana ny sambo. Raha tonga eto Similan, mazava ho azy, azo atao koa ny manao izany (raha tsy manao fitsangantsanganana). Avy eo dia mila manatona an'i Khao Lak ianao. Mandeha any aminy ny bus. Antsoina hoe Thap Lamu ny lakandrano lehibe iray izay andehanan'ny sambo mankany Similans. Amin'ny 8:30, misy sambo iray miala ao, izay an'i Similan National Park. Ny vidin'ny fipetrahana ao dia 2 baht isaky ny dia. Ao anatin'izany dia afaka mandeha any amin'ny iray amin'ireo roa afaka mamela hitsidika ny Nosy Similan ianao.
Tamin'ny taona 2018, nandrara ny handany ny alina amin'ireo nosy ireo, ka tsy azo atao afa-tsy amin'ny sambo fotsiny ny alina, raha te hijanona ao amin'ny Similana mihoatra ny iray andro ianao. Misy fitsangatsanganana eny amin'ireo sambo lehibe misy trano fandraisam-bahiny mampitovy azy, mitovy amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Mandeha any amin'ireo nosy ireo dia tokony hisambotra ianao:
Solon-jiro azo avy amin'ny rano.
Pills ho an'ny fisorohana ny aretina mihetsika.
«Crème na hamafa ny moka.
Salanisan'ny salanisa 1 / 5. Isan'ny isa: 1